राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा ट्रम्पलाई आ पत, पो र्नस्टा रलाई ठूलो रकम तिर्न अदालतको आदेश ! – Jagaran Nepal
राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा ट्रम्पलाई आ पत, पो र्नस्टा रलाई ठूलो रकम तिर्न अदालतको आदेश !
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक पो र्नस्टा रलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । एक अदालतले ट्रम्पलाई ती पो र्नस्टा रलाई ४४ हजार १ सय डलर (५२ लाख नेपाली रुपैयाँ) तिर्न आदेश दिएको छ । आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मुखमा अदालतको यस्तो फैसलाले दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव लड्न लागेका ट्रम्पलाई सम स्यामा पार्न सक्ने देखिएको छ । स्टर्मी डेनियल नामकी पो र्नस्टा रलाई यो रकम तिर्न ट्रम्पलाई अमेरिकाको एक अदालतले आदेश दिएको सीएनएनको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
स्टर्मी डेनियलले ट्रम्पसँग आफ्नो अफेयर भएको दावी गरेकी थिइन् । ट्रम्पले भने स्टर्मीको यो दावीलाई अ स्वी कार गर्दै आएका थिए । ट्रम्पले स्वीकार नगरेपछि स्टर्मीले अदालतमा मु द्दा हालेकी थिइन् उनको मु द्दा पछि र द्द भएको थियो । अहिले अदालतले मु द्दाको क्रममा स्टर्मीले खर्च गरेको पैसा ट्रम्पले तिर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । क्यालिफोर्नियाको अदालतले ट्रम्पलाई ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ ।
डेनियल्सका वकिलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । स्टर्मी डेनियल्सले अदालतको फैसलापछि ट्वीट गरिन् ‘हो, एक अर्को जीत !’ ट्रम्पविरुद्ध मु द्दा हालेपछि स्टर्मीले एउटा किताब पनि लेखेकी थिइन् जसमा उनले ट्रम्पसँग आफ्नो अफेयरबारे खुलेर लेखेकी थिइन् । यो किताब निकै चर्चामा रहेको थियो ।
डेनियल्सले ट्रम्पसँगको आफ्नो कथित अफेयरपछि आफूलाई चुप रहनको लागि पैसा दिइएको समेत दावी गरेकी थिइन् । स्टर्मीको दावीअनुसार यसको लागि सम्झौता गरिएको थियो । ट्रम्पका वकिलको तर्फबाट उनलाई १ लाख ३० हजार डलर (१ करोड ५५ लाख नेपाली रुपैयाँ) दिइएको थियो । डेनियल्सले २००६ मा ट्रम्पको आफूसँग अफेयर भएको दावी गरेकी थिइन् तर ट्रम्पले पटक पटक यसलाई अ स्वी कार गरेका थिए ।